WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone? Lee azịza ya! - Ndị Ọzọ
ekwentị na -aga n'ihu na -agbanyụ wifi
kedu ihe mkpu mkpu iphone m anaghị arụ ọrụ
gbanwee nha font na iphone
akwụkwọ nkwado maka mbata na ọpụpụ
WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone? Lee azịza ya!
Na-achọ ịgwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị okwu iji WhatsApp na iPhone gị, mana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma. WhatsApp bụ ngwa nkwukọrịta kachasị amasị ọtụtụ ndị ọrụ iPhone, yabụ mgbe ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, ọ na-emetụta ọtụtụ mmadụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe ị ga-eme mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone ka ị nwee ike idozi nsogbu ahụ kpamkpam !
Gịnị kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone m?
N'oge a, anyị enweghị ike ijide n'aka ihe kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, mana ọ ga-abụrịrị nsogbu ngwanrọ metụtara iPhone gị ma ọ bụ ngwa ahụ n'onwe ya. Eleghị anya ị nwetara akwụkwọ njehie nke na-ekwu 'WhatsApp anaghị arụ ọrụ nwa oge.' Njikọ Wi-Fi adịghị mma, glitches ngwanrọ, ngwanrọ ngwanrọ nke oge ochie, ma ọ bụ ndozi ihe nkesa WhatsApp bụ ihe nwere ike ibute WhatsApp na nsogbu gị na iPhone.
Soro usoro dị n'okpuru iji chọpụta ihe kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị ka ị nwee ike idozi nsogbu ahụ wee laghachi na ndị enyi gị na-akparịta ụka!
Ihe ị ga-eme mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị
Mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịmalitegharị iPhone gị, nke nwere ike idozi obere nsogbu glitches ma ọ bụ glitches oge ụfọdụ. Iji Malitegharịa ekwentị gị iPhone, pịa ma jide Igodo ike (makwaara dị ka ụra / edemede bọtịnụ ) ruo mgbe ike mmịfe na-egosi na gị na iPhone ihuenyo.
Chere ihe dị ka nkeji, wee pịa ma jide ike bọtịnụ ọzọ ruo mgbe Apple logo pụtara na etiti nke gị iPhone ihuenyo.
Mgbe WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, enwere ezigbo ohere na ngwa ahụ n'onwe ya nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ụfọdụ imechi ngwa ahụ na imeghe ya nwere ike idozi obere ngwa glitches ndị ahụ.
Iji na-emechi WhatsApp, abụọ-pịa Home button imeghe ngwa selector, nke na-egosi niile ngwa ugbu a na-emeghe na gị iPhone. Wee swipe WhatsApp wee pụọ na ihuenyo ahụ. Ga-amara na ngwa ahụ emechiri mgbe ọ na-egosighi na ngwa ahụ.
Hichapụ ma wụnye WhatsApp
Wayzọ ọzọ troubleshoot a malfunctioning ngwa bụ wepụ ya na mgbe reinstall ya na gị iPhone. Ọ bụrụ na faịlụ WhatsApp na-emerụ emerụ, wepụ ngwa ahụ na ịtinye ya ga-enye ngwa ahụ ọhụụ ọhụrụ na iPhone gị.
Iji wepu WhatsApp, jiri nwayọ pịa ma jide akara ngosi ngwa ahụ ruo mgbe iPhone gị na-ama jiji oge na ngwa gị ga-amalite ịma jijiji. Mgbe ahụ emetụ obere X na akuku aka ekpe nke akara ngosi WhatsApp. N'ikpeazụ, metụ Tufuo iwepụ WhatsApp si gị iPhone.
Echegbula: a gaghị ehichapụ akaụntụ WhatsApp gị ma ọ bụrụ na ihichapụ ngwa na iPhone gị, mana ị ga-abanyeghachi ozi nbanye gị.
Lelee maka mmelite maka WhatsApp
Ndị mmepe ngwa na-ewepụta mmelite ugboro ugboro na ngwa ha iji tinye atụmatụ ma kpochapụ chinchi ma ọ bụ glitches. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ oge ochie nke ngwa ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị.
Ka ịchọọ maka nweta nkwalite , mepee Storelọ Ahịa ma pịa akara ngosi profaịlụ gị n'elu ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na enwere mmelite maka WhatsApp, ị ga-ahụ bọtịnụ acha anụnụ anụnụ Imelite n'aka nri ya I nwekwara ike imelite ngwa gị niile n'otu oge site na ịpị aka Melite ihe niile .
Gbanyụọ wifi ma gbanye ya ọzọ
Ọ bụrụ na ị jiri Wi-Fi iji nweta WhatsApp, ngwa ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ihi nsogbu ị nwere na njikọ iPhone gị na Wi-Fi. Dị nnọọ ka ibidogharịa iPhone gị, ịgbanye Wi-Fi ma laghachi azụ nwere ike mgbe ụfọdụ idozi obere chinchi ma ọ bụ njikọta glitches.
Iji gbanyụọ Wi-Fi na iPhone gị, mepee ngwa Ntọala, pịa Wi-Fi , wee pịa mgba ọkụ na-esote Wi-Fi. Ga-amara na Wi-Fi na-agbanyụ mgbe agbanweela ihe mgba ọkụ ahụ. Iji gbanye Wi-Fi, kpatụ mgba ọkụ ọzọ - ị ga-amata na ọ dị mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị!
Chefuo netwọk Wi-Fi gị, wee jikọta ya na ya
Nchọpụta Wi-Fi dị omimi bụ ime ka iPhone gị chefuo netwọk Wi-Fi ma jikọtakwa ya ọzọ. Mgbe ị jikọọ na netwọk Wi-Fi maka oge mbụ, iPhone gị na-echekwa ozi gbasara dika jikọọ na netwọk Wi-Fi.
Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke usoro ahụ ma ọ bụ ozi gbanwere, ọ nwere ike imetụta ike iPhone gị jikọọ na netwọk Wi-Fi. Site na ichezọ netwọk ahụ ma jikọtakwa ya, ọ ga - adị ka ị jikọrọ iPhone gị na netwọ Wi-Fi maka oge izizi.
Iji chefuo netwọk Wi-Fi, gaa Ntọala> Wi-Fi ma metụ bọtịnụ ozi ahụ n'akụkụ netwọk Wi-Fi ị chọrọ ichefu.
Iji jikọta na netwọk Wi-Fi, kpatụ ya na listi netwọk dị n'okpuru Họrọ netwọkụ ... na itinye paswọọdụ (ma ọ bụrụ na gị na WiFi nwere otu).
Lelee ọnọdụ nke ihe nkesa WhatsApp
Mgbe ụfọdụ ngwa ndị ọzọ dị ka WhatsApp ga-arụ ọrụ mmezi ihe nkesa. Gaghị enwe ike iji WhatsApp mgbe mmezi ihe nkesa na-aga n'ihu. Lelee akụkọ ndị a ka ị mara ma WhatsApp sava bụ ala ma ọ bụ n'okpuru mmezi .
Kedu ihe na-eme, WhatsApp?
Successfully nwere ike idozi WhatsApp na-arụ ọrụ na iPhone gị ma ị nwere ike nkata na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị. Oge ọzọ WhatsApp anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, jide n'aka na ịlaghachi n'isiokwu a iji chọta azịza ya! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ, nweere onwe gị ịhapụ ha n'okpuru na ngalaba nkọwa!